Global Voices teny Malagasy » Tambanivohitra Lasa Tompon-daka Manerantany Amin’ny Hazakazaka: Tantaran’i Mira Rai Avy Ao Nepal · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 19 Jolay 2015 7:20 GMT 1	 · Mpanoratra Sanjib Chaudhary Nandika Raveloaritiana Mamisoa
Sokajy: Azia Atsimo, Nepal, Fahasalamàna, Fanatanjahantena, Mediam-bahoaka, Vehivavy sy Miralenta
Mira Rai, mpihazakazaka lavitr'ezaka avy ao Nepal. Sary avy amin'ilay mpisera Flickr rpb1001. CC BY-NC-ND 2.0
Tsy sahaza hoan'ny rehetra ny hazakaza-davitra anatin'ny natiora (trail running), iray amin'ireo fanatanjahan-tena sarotra sy mandreraka. Na izany aza, toa mandeha hoazy izany hoan'i Mira Rai avy ao Nepal. Nandresy vao haingana tamin'ny fifaninanana hazakazaka 80 kilaometatra tao Mont-Blanc , iray amin'ireo sokajiana ho hazakazaka sarotra sy ara-teknika indrindra any Frantsa izy, nahavita ny halaviran-dalana tao anatin'ny 12 ora sy 32 minitra .
Niarahaba an'i Mira tao amin'ny Twitter ny praiminisitra teo aloha Baburam Bhattarai :
Arahabaina i Mira Rai tamin'ny fandresena tamin'ny hazakazaka iraisampirenena.Tsy nahafeno fepetra tamin'ny fidirana tao amin'ny tafika, teo aloha…
Raha nanatevin-daharana ny tafika mpioko Maoista tamin'ny fotoana naha-zatovo azy, dia tsy nahafeno fepetra izy nandritra ny dingana fidirana ao amin'ny tafika.
Vao nahafantatra ny hazakaza-davitra herintaona sy volana vitsivitsy lasa izay, vonona ny ho tonga iray amin'ireo atleta mendrika indrindra amin'ny hazakaza-davitra izy. Nanomboka tamin'ny hazakazaka Fetibe Ivelan'ny Trano Himalayana 50-km tao Kathmandu tamin'ny Martsa 2014 ny dia ara-panatanjahantenany. Nandresy izy na dia tsy nisy fiomanana betsaka aza ary mbola nandresy tamin'ny Fifaninanana Hazakazaka Mustang ny volana Aprily manaraka.
Ivelan'i Nepal, nanomboka ny fandreseny miezinezina tamin'ny Hazakaza-davitra Sellaronda  (57 km) sy Trail Degli Eroi  (83 km) tao Italia tamin'ny Septambra 2014 izy.
Tamin'ny volana Oktobra, nandresy tamin'ny Fifaninanana Hazakazaka An-tendrombohitra 50 kilaometatra tany Hong Kong izy. Tsy nitoditodika tany aoriana intsony izy nanomboka teo.
Lloyd Belcher, mpaka sary sy mpamokatra horonantsary monina any Hong Kong, nisioka hoe:
Miatrika ireo fakantsary miandry azy i Mira Rai @TrailRunNepal  taorian'ny fandreseny tamin'ny hazakazaka @Skyrunning_com  HK 50km
Avy amin'ny tanàna kely iray ao amin'ny distrikan'i Bhojpur atsinanan'i Nepal i Mira. Nitondra fahombiazana ho azy ny zava-tsarotra nolalovany fony izy mbola zaza.
Hoy izy tamin'ny iray tamin'ireo antsafa nifanaovana :
Amin'ny maha-tovovavy ahy, tsy dia liana tamin'ny fanaovana raharaha ao an-trano aho, izany no mahatonga ny reniko nanome asa mila tanjaka toy ny matsaka avy eny an-drenirano, izay lalana adiny roa ny midina ary adiny telo ny mody any an-trano. Efa zatra nibata gonim-bary any an-tsena ihany koa aho mba hivarotra izany sy hitondra vola mody any an-trano. Lehibe tao anatin'ny hazakazaka aho.
Manao fanazaran-tena mafy izy izay mahatonga azy ho salama sy matanjaka. Anisan'ny mahazatra azy  ny mifoha maraina be, mihazakazaka 10-12 kilometatra amin'ny maraina ary 10-12 kilometatra amin'ny hariva. Mihanika vatolampy sy mitondra bisikileta ihany koa izy.
Manome aingam-panahy hoan'ireo te-ho mpihazakazaka lavitr'ezaka hiringiriny i Mira , nametraka ny anarany tamin'ny sehatry ny hazakazaka lavitr'ezaka. Ary tsy adino ireo ankizilahy sy ankizivavy an-tapitrisany ao Nepal izay voajanahary ho azy ireo ny miaka-midina amin'ny lalana mideza amin'ny havoana mibaby entana.
Manana torohevitra kely sarobidy ho azy ireo izy:
‘Opportunity is like a leaf on a river, if you don't grab it fast enough then its gone forever!’ – #MiraRai  #YoungBodyOldSoul 
‘Tahaka ny ravin-kazo eny an-drenirano ny zavatra iray mandalo tokony araraotina, raha tsy maka izany haingana ianao dia ho very mandrakizay iny!‘
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2015/07/19/72027/
 fifaninanana hazakazaka 80 kilaometatra tao Mont-Blanc: http://www.montblancmarathon.net/en/races/mont-blanc-80km
 12 ora sy 32 minitra: http://streetnepal.com/nepalese-girl-mira-won-marathon-du-mont-blanc/
 nanatevin-daharana ny tafika mpioko Maoista : http://nepalitimes.com/article/Nepali-Times-Buzz/mira-rai-trail-running,1776
 Hazakaza-davitra Sellaronda: http://www.sellarondatrailrunning.com/
 Trail Degli Eroi: http://www.traildeglieroi.it/
 Fifaninanana Hazakazaka An-tendrombohitra 50 kilaometatra : http://www.myrepublica.com/portal/index.php/images_2010/news_rss.php?action=news_details&news_id=85475#sthash.ujniYLV7.dpuf
 iray tamin'ireo antsafa nifanaovana: http://www.sisugirls.org/serioussisu/2014/11/4/serious-sisu-mira-rai